समाचार धादिङ १ मा वाम गठबन्धन पक्का, २ मा कडा प्रतिष्पर्धा
धादिङ, मंसिर २२ – प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मत गणना भइरहँदा धादिङ जिल्लाको क्षेत्र नंं. १ मा वाम गठबन्धनको जित निश्चित भएको छ भने क्षेत्र नं. २ मा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ ।
जिल्लाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सबै स्थानमा वाम गठबन्दनका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । शुक्रबार साँझ ५ः३० बजेसम्म जिल्लाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत गणना भएको र शनिबारसम्ममा परिणाम आउने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत उमेश कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका भूमि त्रिपाठीले २१ हजार ४ सय ७९ मत ल्याउनुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसका विश्वप्रसाद अर्यालले ८ हजार ७ सय ७३ मत ल्याउनुभएको छ । यो क्षेत्रको ३४ हजार ३ सय ८ मत गणना गर्दा १ हजार ९ सय ९२ मत बदर भएको छ ।
यसको प्रदेश सभा १ मा नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले २० हजार ५ सय ५२ मत ल्याउनुभएको छ भने नेपाली कांग्रेसका मधुकुमार श्रेष्ठले १० हजार १ सय ३८ मत ल्याउनुभएको छ । यो प्रदेशको २८ हजार ४ सय २६ मत गणना गर्दा १ हजार १ सय २ मत बदर भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश नं. २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मरकट्टेलले १७ हजार २ सय २ मत ल्याउनुभयो भने नेपाली कांग्रेसका प्रभातकिरण सुवेदीले ७ हजार १ सय ७८ मत ल्याएर पछ्याइरहनुभएको छ । यो प्रदेश क्षेत्रको २२ हजार ५ सय २९ मत गणना गर्दा ९ सय १३ मत बदर भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ मा नेकपा एमालेका खेमप्रसाद लोहनीले १७ हजार १ सय ५० मत ल्याउनुभएको छ । उहाँसँगै नेपाली कांग्रेसका दिलमान पाख्रिनले १६ हजार ६ सय १६ मत ल्याएर पछ्याइरहनुभएको छ । यो क्षेत्रको ३३ हजार ६ सय ५५ मत गणना गर्दा १ हजार ५ सय ८१ मत बदर भएको छ ।
यसको प्रदेशसभा १ मा नेकपा एमालेका डा. रामकुमार अधिकारीले १३ हजार ८ सय १५ मत ल्याउनुभएको छ भने नेपाली काग्रेसका रमेश धमलाले १३ हजार २ सय ६१ मत ल्याउनुभएको छ । यो प्रदेश क्षेत्रको २५ हजार ८ सय ७१ मत गणना गर्दा ८ सय ५८ मत बदर भएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सभा क्षेत्र नं. २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका १४ हजार ९२ मत ल्याउनुभएको छ । उहाँलाई राप्रपाका डम्बर तामाङले १३ हजार ३ सय ३० हत ल्याएर पछ्याइरहनुभएको छ । यो प्रदेश क्षेत्रको २९ हजार १ सय ९७ मत गणना गर्दा ८ सय ७८ मत बदर भएको छ ।
यसरी हेर्दा जिल्लामा हाल मतगणना भएको मध्येबाट ७ हजार ३ सय २४ मत बदर भएको देखिन्छ । मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएकोले यसरी मत मदरसंख्या बढेको पर्यवेक्षक विश्वराज अधिकारीले बताउनुभएको छ ।
क्षेत्र नं. २ मा प्रतिष्पर्धा देखिएको छ भने क्षेत्र नं. १ मा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारीको जित निश्चित भएकोले कार्यकर्ताहरु झण्डा बोकेर नारा जुलुस गर्न थालेका छन् ।